Umhla My Pet » 7 Izizathu Freaky Ukuthandana umxokozelo Ngaba Khwelela ngumdla
7 Izizathu Freaky Ukuthandana umxokozelo Ngaba Khwelela ngumdla
ukubuyekezwa: Jul. 07 2020 | 2 min ukufunda
Wonke umntu uye weva loo mfo lowo ndade ezinkonkxiweyo kuba wayesele match.com ngexesha emsebenzini. Kufuneka nakanye kwi website yakho ukuthandana xa sisemsebenzini. Inokunika ngengqiqo yokuba andikhathali ngokuba apho, okanye awufuni ukuba Nazi ezinye iingcebiso eziya kukunceda ugcine impumlo yakho icocekile kwaye uhlale ngaphandle inkathazo xa uthandana nomntu online kwaye ufuna kuba nako ukwenza kakuhle umsebenzi.
Wena kuwa emva umsebenzi wakho
Ukuqalisa, uya kusoloko ufuna ukuba ngexesha. Esinye isizathu ungacela ugxothwe ukuthandana online ayiqalisi na yakwenza nawe nokuba kwi internet emsebenzini lopelo inbox yakho. Ukuba ufuna ukuhlala liyaphuma embandezelweni, ukukhangela imiyalezo yakho lesidlo sasemini okanye xa ufika ekhaya. Musa ukufika emva kwexesha emsebenzini.
umqeshi wakho ucinga ukuba ukuchitha ixesha lakho kwi-intanethi
Enye into yokuba angazibona ekufumaneni ukuba uyagxothwa ngenxa ukuthandana Intanethi ukhangela ukuthandana yakho website inbox emsebenzini. Wena kukho ukusebenza, lokuba ziqiniseka ubomi bakho zentlalo. Ukukhangela inbox yakho ebalulekileyo, kodwa ufuna ukuyenza xa kwi ikhefu okanye ngelinye ixesha ukuba awunayo ukusebenza. kungenjalo, umqeshi wakho ungacinga ukuba achithe ixesha kwi-intanethi, kwaye uzakuphela ugxothwe bebaqeshela nomntu “alikho kwi internet lonke ixesha.”
Ubonakala ngathi into abafihlela yona
Kufuneka kusoloko aqaphele ukuba ukuziphatha kwakho lubonwa. Ukuba ezinemikhwa engaqhelekanga okanye uzama yokugubungela okuthile emsebenzini, umqeshi wakho uya nangoko ukrokrela into, uze ugcine iliso kufutshane kuwe. Omnye elula slip-up kunye bam, sisheke Uyile.
ngaba ayikho bhetyebhetye ngokwaneleyo
Bhetyebhetye Enye inxalenye ebalulekileyo ukuthandana intanethi yaye ubomi ngusomashishini. Kusenokufuneka ukuba uphinde-amalungiselelo ucwangciso lwakho kancinane, kodwa ukuba ngokwenene umqeshi wakho ifuna into eyenziwe, ixesha kuye okanye.
Ukuba akazimisele umsebenzi wakho
Kufuneka unikele ingqalelo imigudu wena siphangela. Xa ucinga ngoko niya kunxiba loo mhla eshushu ukuba ngokuhlwanje, u nga ugxininisa umsebenzi wakho, kwaye siphangela isakhono sakho ngokupheleleyo.
Wena badmouth umqeshi wakho online
ngokunjalo, umele ungaze badmouth inkampani, nkqu ukuba umhla wakho online. Ukuba inkampani yakho wafumanisa ngalo, oko kunokukhokelela ekugxothweni emsebenzini wakho, yaye akukho bani ofuna ukuba. Gcina zonke izimvo zombane malunga ezintle wakho emsebenzini.
Ukuba kunye nabantu abangalunganga lwabantu
okokugqibela, kufuneka nje uzame ngokubanzi ukuze siphume lembandezelo. Ukunxulumana uhlobo engalunganga lwabantu kunokukhokelela kuwe kokuba ugxothwe. Ukulandela la macebiso kuya kukwenza uphumelele ebomini bakho bobabini uthando kunye nobungcali.